URamaphosa uxhasa iMelika: “Singanisiza ukubhekana nalokhu” | Scrolla Izindaba
URamaphosa uxhasa iMelika: “Singanisiza ukubhekana nalokhu”
NgoNhlangulana kowezi-1993 iqulu lamalungu e-Afrikaner Weerstandsbeweging (AWB) ayehlome eyizingovolo ashaya izicabha ze-World Trade Center e-Kempton Park ngemoto ephethe izikhali.
Batheleka lapho okwakuhleli khona abaholi be-African National Congress namanye amaqembu ezepolitiki bexoxisana ngesivumelwano esisha sezepolitiki seNingizimu Afrika.
Ngesikhashana nje, amalungu ayekhona acasha ngaphansi kwamadeski nasemakhabetheni bengazi noma bazobulawa yini. Phakathi kwabo kwakukhona umphathi omkhulu wezingxoxo ye-ANC, uCyril Ramaphosa kanye nabanye abaholi benhlangano abathathwa njengabahlosiwe ngakwesokunene.
Kwakuwukwesaba okukhulu. Okwathi ezinyangeni ezimbalwa nje umholi we-ANC owayenekhono uChris Hani wabulawa ngabantu abangabasekeli kanti futhi nomkhankaso owesabekayo wobudlova wawusaqhubeka emalokishini.
Kuleli sonto uRamaphosa, njengamanje onguMengameli waseNingizimu Afrika, ube namazwi athile okuxhasa iMelika ngemuva kokuba isixuku sezinkulungwane sabasekeli bakaDonald Trump benqobe i-Capitol, isihlalo sesishayamthetho saseMelika, enkundleni efana naseNingizimu Afrika eminyakeni edlule.
Abenzi bomthetho nabasebenzi bazifihle ebuthweni elihlaselayo ngemuva kokugqugquzelwa ukuba bahlasele i-Congress nguMengameli uTrump obefuna ukugwema ukuqinisekiswa kokhetho ahlulwe kulo yimbangi uJoe Biden. Kushone abantu abahlanu.
I-AWB igcine isishiyile lesi sakhiwo, kodwa udlame oluhlose ukuvimba intando yeningi luqhubekile – yize ubuholi bukaNelson Mandela nabanye buholele izwe okhethweni olunokuthula kanye noguquko.
INingizimu Afrika ikulungele ukwabelana ngolwazi lwayo lokuguquka ngokuthula kube yintando yeningi uma kwenzeka iMelika ibuza, kusho uRamaphosa etshela uMzwandile Mbeje we-SABC. “Kungijabulisile ukuzwa omunye wabo ethi, kuningi abazokufunda ngisho nakuNelson Mandela naseNingizimu Afrika.
“Uma kukhona abafuna ukukufunda kithina, sikulungele ukubanikeza ulwazi lwethu nokuthi sikwaze kanjani ukubhekana nesimo esinzima kakhulu esabhekana naso ekuqaleni kwentando yeningi yethu.”
URamaphosa uthe, ushaqekile ngalezi gameko njengabobonke abantu emhlabeni jikelele, kodwa wathi iMelika kumele ibe nendawo yokubhekana nale nkinga.
“Kuwudaba okufanele babhekane nalo futhi uma umuntu efunda imibiko yezindaba futhi ebuka umabonakude, basezinhlelweni zokwenza lokho futhi esingakusho nje ukuthi sibafisela okuhle kodwa njengoba befuna ukuletha uzinzo kwintando yeningi yabo.”
Khonamanjalo, kuyaqondakala ukuthi uBiden uthumele incwadi kuRamaphosa embonga ngamazwi akhe anomusa nezifiso ezinhle zokumhalalisela ngokunqoba kwakhe futhi ubheke phambili ekusebenzisaneni noMengameli kanye nohulumeni waseNingizimu Afrika ekulweni nezinkinga ezivamile ezibhekene namazwe abo – ikakhulukazi ukubhekana ne-Coronavirus.